မိသားစုတိုင်းကြည့်သင့်တာလေးက | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » မိသားစုတိုင်းကြည့်သင့်တာလေးက
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Jan 14, 2013 in Entertainment, Movies/TV | 33 comments
ကျွန်မက နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်တော်တော်ကြည့်သူတစ်ဦးပါ။
အထူးသဖြင့် ရိုမန့်တစ်နဲ့ဒရမ်မာတွေပါ။ အက်ရှင်တွေလည်း မကြည့်ဖူးလားဆိုတော့ တော်တော်ကြည့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အက်ရှင်တွေကိုကျတော့ ကိုယ်ကြိုက်လို့ ရွေးထုတ်ကြည့်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ တခြားသူကြည့်နေတာကို ၀င်ကြည့်ပြီး မထတမ်းဖြစ်သွားတာပါ။
ဒီဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လေးကို ကြည့်ကြဖို့ ညွှန်းပေးချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ရပ်ပေါ်လာခဲ့မိပါတယ်။
အရင်က ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေဆို ဟင့်အင်း လို့ချည့်ငြင်းမိနေကျပါ။
အခုနောက်ပိုင်း ရိုက်ကူးပုံတွေပြောင်းလဲ တိုးတက်လာတဲ့ ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေကို သဘောကျလာပါတယ်။
ကုလားကားဝယ်ခဲ့ပါ လို့ သီးသန့်မမှာကြားတတ်ပေမယ့်…ဒီကုလားကားအရမ်းကောင်းတယ် လို့ညွှန်းပြီးဝယ်လာပေးရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်ရင်း ကုလားကား ကောင်းကောင်း။ ၄၊၅ကားလောက် စုမိနေပါပြီ။
အဓိကပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့က ကလေးတွေရဲ့အားနည်းမှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုကို အုပ်ထိန်းသူ လူကြီးတွေ၊ဆရာတွေအနေနဲ့ နားလည်ပေးနိုင်ရမယ်။
ကလေးက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အမြင်အာရုံရှိတာလေ
အဲဒါ မင်းသားနဲ့တွေ့မှ လူမှန် နေရာမှန် ရောက်သွားတာ
ကြည့်ရင် တခြားကားတွေပါ ထပ်ကြည့်ချင်လို့
လက်ရှိတော့ eega ဆိုတာလေး မနေ့ကမှ ကြည့်လို့ပြီးတယ်
EEGA ကတော့ ပထမပတ်က ကြည့်ဖြစ်တယ်သကြားရေ။ယင်ကောင်လေး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအရမ်းသဘောကျမိတယ်။
အမှန်ပါပဲDon Juan Ronald ရှင့်။တကယ်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ပါ။
ကလေးက စာမှတ်ရတာ မရှင်းတဲ့ရောဂါရတာတဲ့။
ပြောင်းပြန်တွေမှတ်တယ်။စာနဲ့စိတ်ကူးယဉ်တာတွေနဲ့ရောပြီး သူနားလည်သလိုတွေ ဖန်တီးတယ်။
မိဘတွေတိုင်း နံပါတ်တစ်တွေကိုချည့်မမျှော်မှန်းသင့်ကြောင်း၊ကလေးရဲ့အားသာချက်နဲ့လိုက်ဖက်တာကို တွန်းအားပေးသင့်ကြောင်း လေ့လာမိတယ်။
ကျုပ်ကတော့ ကုလားကားထဲမှာဆိုရင် အွန်ရှန်ဒီအွန် ရုံတင်တုန်းက ၂ခါသွားကြည့်တယ်
နောက်ပြီး ၊ အခုနဲနဲနာမည်ရနေတဲ့ ဟာသမင်းသား (တရုတ်သိုင်းကားရိုက်တဲ့တစ်ယောက်) သူ့ ကားတွေ ဆိုရင် မလွတ်တမ်းကြည့်တယ်
အိမ်နားမှာတော့.. ကုလားကားတင်တဲ့..ရုပ်ရှင်ရုံလေးရှိတယ်..။ သွားတော့မကြည့်ဖြစ်သေးဘူး..
အခုယူထားတဲ့… Netflix ထဲမှာတော့ အခုကား မတွေ့မိဘူး..
အဲဒါ.. Google TV, apps တွေထဲများ ရှိမလား.. သွားရှာတော့.. အောက်က App လေးတွေ့တယ်..။
စိတ်ဝင်စားစရာက.. အဲဒီ Appရဲ့.. Description ပါ…။
This app requires 3G/WiFi Internet Connection. It will work in 2G also but will take time to buffer and you will see more of “Can not play this video” messages.
If you get message “Cannot play this video” please Retry it. This problem occurs due to connection time out from YouTube server.
DISCLAIMER: The content provided in this app is hosted by YouTube and is available in public domain. We do not upload any Hindi Movies to YouTube. This app is just an organized way to browse and view these YouTube Videos
ရုပ်ရှင်ဆို.. ဘီလူးသရဲစီးကြိုက်တာမို့.. ကားကောင်းလေးတွေ..ညွှန်းဆို.. တင်ပေးစေလိုပါကြောင်းရယ်..
သူကြီးက ဘီလူးကား ကြိုက်ကြောင်း ကြေငြာ နေတယ်ဟေ့။
သူကြီးက ဘီလူးသရဲစီးတာကြိုက်တယ်ဆို ….. ကုလားကားထဲမှာ အဲဒီကားတွေရှိတယ် … ဟိုတစ်လောက ကြည့်တာ တော်တော်ကောင်းတယ် ….. ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ဖွဲ့တာ ယိုးဒယား၊ ဒရက်ဂူလာ၊ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ မလေးအားလုံးထက်သာတယ် …. သီချင်းဆိုခန်းတွေလည်းမပါဘူး …… မနက်ဖြန်ကျမှ ကားနံမည်တွေတင်ပေးမယ် …… ဒီက သရဲဘီလူးကားတွေဆို အရမ်းကြိုက်တာ … ဇာတ်လမ်းတွဲဆိုရင်တော့ မကြည့်ဘူး ….. မကြည့်ဖူးတဲ့သရဲကားက တော်တော်တော့ ရှားတယ် … အခုက အဲဒီကားတွေကြည့်တာ ရပ်ထားတယ် ……
အဲဒီ.. အတင်းဖြဲခြောက်ပြတဲ့ကားတွေများ.. ဘီလူးသရဲစီးမုန်း… မုန်း…. လွန့်လွန်လွန်းလို့.. :harr:
တဂျီးရေ ရုပ်ရှင်အညွှန်းတွေတင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလို့ကတော့ ဘီလူးသရဲစီးတင်ပေးလိုစိတ်ရှိပါတယ်။
တော်ကြာ ရုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပြီး ကြော်ငြာတယ်ထင်မှာဆိုးလို့
နောက်လည်း ကားကောင်းလေးတွေ အဆက်မပြတ် တင်ပေးချင်ပါတယ်။
အရီး အဒေါ်က ကုလားကား အင်မတန်ကြိုက်လို့ ငယ်တုန်းက အရမ်းကြည့်ရတာ။
Post လေးတွေကို ဖတ်ပေမဲ့ ဒီရက် မှတ်ချက်တွေ မပေးဖြစ်တာ စိတ်မရှိပါနဲ့ မနန်းရေ။
မမနန်းပြောမှ ကြည့်လိုက်အုံးမယ် နောက်ဆိုအသုံးဝင်လာမယ်လေ ကြိုတင်လေ့လာထားမှ တော်ကာကျမယ် :harr:
အရီးရေ မှတ်ချက်မပေးဖြစ်တာကိုနားလည်ပါတယ်။မှတ်ချက်ပေးရတာလဲ အချိန်တစ်ခုပေးရတာပဲလေ။အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေဘယ်ပေးနိုင်မလဲ။၀င်ဖတ်ပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဗုံဗုံကော အရီးပါ ဒီကုလားကားလေးကြည့်ကြည့်ပေါ့။ကျွန်မလည်း သူများဝယ်လာပေးလို့ ကြည့်ဖြစ်ရင်းကြိုက်သွားတာပါ။
mamanoyar ရေ ကြည့်လိုက်ပါ။နောက်လဲ ကားကောင်းလေးတွေညွှန်းပေးဦးမယ်။
ကိုThu Wai ပြောတဲံကားတော့ ကျွန်မမကြည့်ရသေးဘူး။ကျွန်မက ကုလားကားအကြည့်နည်းလို့ပါ။
အဲဒီမင်းသားပါပဲ3idiot နောက်ပြီး အခု ထွက်နေတဲ့ကား Berfil ဘာဖေး ဆိုတဲ့ကားအဲဒီမင်းသားတော့မဟုတ်ဘူး တော်တော့်ကို ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေပါ တအားလည်းရယ်ရတယ်။
မနန်းရေ… မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ .. ရှာဝယ်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ့မယ်နော်…
Tin Tin၊ ဆြာအုပ်နဲ့ ကိုမင်းနန္ဓာ ရေ ကလေးတွေအတွက် အုပ်ထိန်းသူတိုင်းကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဒေါင်းကြည့်တာ ရုံးကစက်ကလေးနေတယ် …. အခွေရှာငှားကြည့်မှပဲ ကြည့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် …. မိသားစုကားလေးဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားပါတယ် ….
မှတ်မှတ် သားသား အဲ့ မင်းသား ပါတဲ့ကားတွေ ကောင်းတာများပါတယ်….
အခုထိ ခနခန ပြန်ကြည့်မိတဲ့ကားကတော့ 3Idiots ပါ
မKhaing Khaingရေ အခွေသာဝယ်ကြည့်လိုက်။၀ယ်လို့လွယ်ပါတယ်။
ကိုတိမ်မည်းရေ အဲ့ဒီမင်းသားရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်က ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင် မျက်ရည်ဝဲမိတယ်။
3 idiots ကိုတော့ တော်တော်ကြိုက်မိပါ့
အရမ်းကြည့်ချင်တဲ့ ကား တစ်ကားရှိတယ်
ဇာတ်လမ်းမှာတော့ မင်းသားက စကားမပြောတတ်ဘူးဗျ
နာမည်မေ့နေလို့ အခုထိ မကြည့်ရသေးဘူး
မင်းသားက စကားမပြောတတ်ဘူး …. မင်းသမီးက ကျပ်မပြည့်ဘူး …. သူတို့နှစ်ယောက်ယူသွားတယ် …. အဲဒါကို ဦးနှောက်ပြည့်တဲ့မင်းသမီးက သူတို့နဲ့အတူ သက်ဆုံးတိုင်နေသွားတယ် …. အဲဒီကားလား ….. ကြည့်ချင်ရင် ခွေဝယ်ကြည့် နံမည်ပြောပြပေးမယ် … ခုတော့ မမှတ်မိဘူး ….
ကျုပ်တော့ ကျည့်ဖူးဘူး ယောက်ခမဂျီးရေ …
နောက်တော့ ဒေါင်းပီး ကြည့်လိုက်အုံးမယ် …
ကုလား ကားတွေလည်း ..
ကောင်းတဲ့ကား တော်တော် ကောင်းဒယ်ဂျ …
အက လေးတွေကသာ နည်းနည်း ရှည်နေတာ …
ခမည်းခမက်သကြားပုလင်းပြောတဲ့ကားကို ကျွန်မကြည့်ဖူးသလိုပဲ သိပ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူး။
မောင်အံရေ အခုကုလားကားတွေက ရိုက်ကူးပုံပြောင်းလာပါပြီ။အကတွေနဲ့ပေရှည်နေတဲ့ကုလားကားတွေတော့ အစ်မလဲမကြိုက်ပါဘူး။
အဲသဟာကြောင့် ကုလားကားဆို ဟင့်အင်း ခဲ့တာပေါ့။
အခုနောက်ပိုင်းကားတွေ ကြည့်ကြည့် မကတော့ဘူး။
3 idiot က အဲဒီမင်းသားပဲ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ညွှန်းတဲ့ကားလေးလည်းကြည့်ဖူးတယ်…ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ.. :hee:
ပထမတစ်ခါ ခွေဆိုင်ကငှားကြည့်တော့ ဘာစာတန်းမှမပါဘူး။
နောက်တစ်ခါ တရုပ်ပြည်ဘက်ကလာတဲ့ အတွဲကားထဲမှာပါလာတယ်။
ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီလိုကားမျိုးက မူရင်းခွေဝယ်ချင်ပါတယ်ပြောလဲ ရောင်းပေးမယ့်ဆိုင်မရှိဘူး။
အိမ်ကအမျိုးသမီးကတော့အလွန်ကြိုက်
ကျုပ်ကတော့မျက်စိမှိတ်ထားတာ ။သူတို့ ကျေနပ်အောင် လိုက်ပြပေမဲ့ 
နားတွေညီး မျက်စိတွေနောက်လို့မကြည့် တာ
ကုလားကား တွေက ကောင်းပါတယ် (အကတွေ တိုတိုတုတ်တုတ်လုပ်ရင်ပေါ့)